Nakaton’i Ozbekistan ny tranonkala Newsuz.com · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Janoary 2019 4:06 GMT
Voalaza fa nakatona tao Uzbekistan ny tranonkala amin'ny teny Ozbeky, Newsuz.com. “Taorian'ireo andian-dahatsoratra mitsikera ireo olana momba ny zon'olombelona, ​​ny olan'ny famatsiana etona, sy ny fiakaran'ny vidim-piainana, ary koa ny lahatsoratra manadihady momba ny fifidianana vao haingana, nanomboka nahazo taratasy miaraka amin'ny fandrahonana sy fangatahana hanaraka ny vaovao nalefa tao amin'ny tranonkam-panjakana izahay. Tsy nanao izany izahay, ary vokatr'izany nakatona ny tranonkalanay, “hoy ny lehiben'ny tonian-dahatsoratry ny gazety Newsuz.Com, Aziz Nosirov.
Matetika ny governemanta Ozbeky mandà ny fisian'ny fanivanana aterineto: “Miaina amin'ny vanim-potoanan'ny teknolojia informatika isika, ary mirongatra ny fanambarana rehetra milaza fa voasivana ny aterineto na niakatra ny fahatsontsana,” hoy ny fanambaran'ny minisitry ny raharaham-bahiny, Eljer Ganiyev indray mandeha.
Na izany aza, araka ny filazan'ny Open Net Initiative (ONI), mitazona ny rafitra fanivanana faran'izay mivoatra sy miparitaka any amin'ireo firenena mikambana ao amin'ny Fikambanamben'ny Fanjakana Mahaleotena (CIS) i Ozbekistan. Nanambara ny Reporters Sans Frontières (RSF) tamin'ny 7 Novambra 2006 fa anisan'ireo firenena 13 tondroin'ny ONG ho “Fahavalon'ny Aterineto” i Ozbekistan.